Maalinta: Maarso 16, 2019
Treenka Jasiiradda 7 Saldhigga Adapazarı Kadib Fasaxa Sanadka: Tareenada Rakaabka ee Jasiirada ee ay maamusho TCDD Agaasinka Guud ee Gaadiidka 16 Maarso 2019 (maanta), waxay bilowday inay mar kale ka shaqeyso Adapazarı. Dheer-dheer [More ...]
Gebze Orhangazi Wado kale ayaa loo isticmaali doonaa Isgoysyada Waddooyinka ee Izmir
Gebze Orhangazi İzmir Dhismaha Wadada Wadooyinka oo dhameystiray inta udhaxeysa Balıkesir North Junction - Balıkesir West Junction iyo Akhisar Junction - Qeybaha Isgoyska Saruhanlı, oo ay ka qeyb galayaan Madaxweyne Recep Tayyip ERDOĞAN 17 Maarso [More ...]
1915 Dhamaystirida Hal Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Shaqooyinka Dhismaha Biyaha ee Canbaarta
Ka qeyb galka Madaxweynaha Recep Tayyip ERDOĞAN, goobta 18 18anakkale Bridge waxaa la booqan doonaa iyadoo qeyb ka ah barnaamijka Guusha Badda ee kaleanakkale iyo Barnaamijka Maalinta Martida ee Maalinta Isniinta, Maarso 1915. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Motorway [More ...]
Tareenka ayaa loo celiyay Ankara YHT Station
Kadib shilkii YHT ee ka dhacay Ankara bishii Diseembar 13-keedii, tareenka ayaa ka tagay Eryaman YHT Station in muddo ah ka dibna wuxuu sii waday in laga sii sameeyo Saldhigga Ankara mar labaad. [More ...]
Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka ee Madaarka Istanbul
Kınalı-Odayeri qeybta Waqooyiga Marmara ee Wadada Wadada Isku xirta Çatalca-Yassiören iyo Isgoyska Habibler-Başakşehir ayaa maanta lagu furi doonaa xaflad ay ka qeyb galayaan Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan iyo Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan. Wadada Waqooyiga Marmara [More ...]
Qodobbada jiidashada ah ee Bilecik in ay ku xiran yihiin baabuurta Cable
Duqa Magaalada Bilecik Nihat Can wuxuu sii wadaa inuu bulshada ku wargaliyo mashruucyada aragtida ee u diyaarin doona Bilecik 2023. Duqa Magaalada Nihat Ayaa U sharixi kara Mashruucyadiisa isagoo adeegsanaya fikradda Cumhuriyet Waxaan Ku Soo Qaadan Bilecik Mashaariicda Himilo ee 100 ee Jamhuuriyadda, [More ...]
ASTTI waa Qodobka ugu horreeya ee Qodobka Goynta Rakaabka ee Wadada Xirlika
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa wadada, buundada, xad dhaafka iyo dib u cusbooneysiinta howlaha daruuriga ah ee laga fuliyo dhammaan caasimadda iyada oo aan la gaabin. Adkeynta weyn ee isku xirka wadooyinka cusub ee wadada waqooyiga-koonfur, bariga-galbeed [More ...]
Muwaadiniinta wabiga ayaa raaxo leh inta la sugayo baska
Kooxaha Gaadiidka ee Dawlada Hoose ee Magaalada Manisa, inta ay sugayaan Muwaadiniinta degmada Gölmarmara xagaaga qoraxda, xilliga qaboobaha, roob da dartiis si ay u saameyso degmoyinka Tiyenli, Hacıveliler iyo saldhigga xaafadaha Çömlekçi. muwaadiniinta [More ...]
Kayseri si ay ula kulmaan Basaska Korontada
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaysaa maalgashiyadeeda gaadiid iyada oo aan hoos u dhicin. Baska korantada ee 6, oo loo soo iibiyay gaadiid ka raaxo badan, ayaa waxaa soo bandhigay Duqa Magaalada Metropolitan Mustafa Mustafa Çelik. Madaxweyne Celik, deegaanka, raaxada iyo [More ...]
Akçaray ayaa gaabis ah! 18. Gaadiidka gawaarida tareenka
Mid ka mid ah laxiriira Degmooyinka Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark A.Ş. ayaa helay 2 ee taraammada la dalbaday sababtuna tahay tirada rakaabka ee ku soo kordha taraamka, qancinta muwaaddinka iyo kordhinta tareenka ee marxaladda 18. Tayada adeegga [More ...]
Shirweynihii 4-aad ee Akıllı World Smart Cities Congress Istanbul'19 en, oo loo abaabulay markii afaraad ee sanadkan ay martigeliso Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul, ayaa soo gabagaboobay. Shirweynaha halkaas oo fikradaha, mashaariicda iyo naqshadaha nidaamyada teknolojiyadda mustaqbalka looga wada hadlo 3 maalmood; aad [More ...]
Rakaabka koowaad ee Kabatas Pier ayaa la soo dhaweeyay carnation
Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ayaa dhammaystirtay wejiga koowaad ee mashruuca Kabataş Square iyo Transfer Center ”. Wadooyinka Magaalada, labada meelood ayaa loo xilsaaray adeegsiga duullimaadyada khadka Jasiiradaha iyo Bosphorus. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) markay ahayd 2016 bishii Luulyo [More ...]
U adeega inta u dhaxaysa Kurtkoy Dooxada Dhexe ee Jidka Waqooyiga Marmara
19 ayaa la furi doonaa Talaadada, Maarso iyadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweyne Recep Tayyip ERDOĞAN inta udhaxeysa Kurtköy-Liman Intersection ee Kurtköy-Akyazı Qeybta Waqooyiga Marmara. Waxay ku taalaa Kurtköy-Akyazı Qaybta Waqooyiga Marmara [More ...]
Ku dhaji Dhamaadka Jidka Rakaabka
Sannadkii 2018, Malatya Metropolitan Dawladda Hoose, oo dayactirtay jidadka 26 iyo jidadka meela lagu raaxeysto, waxay ka sameeyeen shaqooyinka kiiloo mitir kiiloo mitir ee 3.3, 50-ballaadhka Yüzakı ee isku xira Tecde iyo Isgoyska Maşti. [More ...]